निन्द्रा बिथोल्ने भेरीले, कुदुको चित्त कहिले बुझाउला ? «
निन्द्रा बिथोल्ने भेरीले, कुदुको चित्त कहिले बुझाउला ?
प्रकाशित मिति : ३१ भाद्र २०७७, बुधबार १०:३९
भेरी नगरपालिकाको रु ५० लाख लगानीमा निर्माण भएको बोरिङ मेसिनबाट पानी निकाल्ने काम अहिले एक घण्टा पनि सञ्चालन हुन नसकेको सर्वसाधारण बताउँछन् । विद्युत आपूर्ति भएमा मात्र सो पानी सञ्चालनमा आउने गर्दछ । एक घण्टा मात्र आउने पानीले कुदुका सर्वसाधारणलाइ छेउ टुप्पो केही नपुग्ने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । झण्डै २०० घरधुरी रहेको कुदुमा उक्त पानी हातीको मुखमा जिरा भएको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । रासस